China sheet steel stainless zokwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Iimakhishithi zensimbi ezingenasici
Ukubethelwa embossing ngokusisiseko kuthetha ukwenza ezinye iintlobo zoyilo, ukubonakala okanye iipateni komnye umphezulu njengephepha, ilaphu, isinyithi okanye ulusu. Amashiti e-stainless steel embossy enziwe ngesinyithi esiqingqiweyo kwaye asetyenziswa kwiindawo ezininzi ngakumbi kwiindawo ezihamba abantu abaninzi. Inkqubo yokuveliswa kwala maphepha ibandakanya ukuqengqa kweepateni ezahlukeneyo kwiimakhishithi. Ezinye zeepateni ezaziwa kakhulu onokuzifuna yimisedare erhabaxa, iinkuni eziziinkozo, iinkozo zesikhumba, ingqolowa yemozulu kunye ne-stucco.
Sino Stainless intsimbi malunga Emzantsiweb Sengenantlonelo Siteel Siiheets
IBakala: 304, 201,430,
Ububanzi: I-1000/1219 / 1500mm / eyenziwe ngokwezifiso
Ubude: 6000mm / coil
Ifilimu: I-PE emibini / i-laser PE
Isikhumba 2B Mill Gqiba intsimbi engenasici,
Isikhumba Rose Gold steel stainless,
Isikhumba BA insimbi engenasici,
Wood Brass intsimbi engenasici,
Linen BA steel stainless,
Ilinen Antique intsimbi engenasici,
Ilinen Brass intsimbi engenasici,
ICY Bamboo intsimbi engenasici,
Square kwithala steel stainless,
I-6WL insimbi engenasici,
I-5WL insimbi engenasici
Iimakhishithi zensimbi ezingenasici yenze inkqubo engqongqo kakhulu yokunyusa umgangatho kunye nokuqina. Umgaqo wokuvelisa kukwakha uyilo olunokuhlala ixesha elide kwiindawo ezinobungozi kunye nokubi kakhulu. Inkqubo ye-embossing ivumela ukuqengqeleka koonobumba abaninzi bamanani aprintiweyo, okubhaliweyo okanye iisimboli kwiintambo, imibhobho nezinye izixhobo. Isitshixo senkqubo yokuvelisa kukwenza ukungqubana, ukuseka ukusasazeka okusebenzayo kwezithambisi, ukonyusa ukuqina kwesinyithi kunye nokuqina, ukunyuka kwendawo yentsimbi yokuhambisa ubushushu okanye ukusetyenziswa kweacoustic, kunye nokunyusa ukubambeka.
Sheet iphepha Material: Iimakhishithi ezingenanto ezingenanto zenziwe ngentsimbi esemgangathweni. Ezinye zezinto eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zi-aluminium, isinyithi esiphakathi, okanye intsimbi engenasici. Izinto ezisetyenzisiweyo kufuneka zibe neempawu zokuguquguquka, ezikwaziyo ukunyamezela ukuqhuba okuphakathi ukuya kwimveliso ephezulu kunye nokukwazi ukugcina ubukhulu obufanayo ngexesha lenkqubo yokubhala. Into ebaluleke kakhulu ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba umgangatho wentsimbi okhethiweyo xa kugqitywa i-embossing. Qiniseka ukuba intsimbi ikumgangatho ophezulu kwaye ayitshintshi imilo yayo kakhulu xa ishushu.
Izicelo: Kwimarike, iimakhishithi ezifakwe ngaphakathi zisetyenziswa kuluhlu olubanzi lwamabala. Nangona kunjalo, ezona zicelo ziphambili zala maphepha ziyasebenza kwaye zinobuhle. Ezinye zezinto ezibonakalayo zokwenza ubugcisa kukunyathela izitepsi, iiphaneli zekhetshi, iiphaneli zomnyango wegaraji, ifanitshala yeofisi yesinyithi, isinqe semoto kunye neemveliso zokwakha.
Egqithileyo iimakhishithi zentsimbi ezingenabala
Okulandelayo: amaphepha steel stainless
Iphepha le-Metal elihonjisiweyo
Iphepha le-Metal elikroliweyo
Incwadi Sheet Stainless
AmaFayili e-Stainless angenaglasi
Plate yentsimbi kwithala lakho
Iphepha le-Steel elikroliweyo
Iintsimbi ezingenanto ezingenanto (i-0.3mm-8mm)